မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းမှန်လျှောက်ဆဲလား၊ လမ်းချော်လွဲပြီလား – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းမှန်လျှောက်ဆဲလား၊ လမ်းချော်လွဲပြီလား
In Broadcast, Media Room, MYANMAR QUARTERLY
” မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းမှန်လျှောက်ဆဲလား၊ လမ်းချော်လွဲပြီလား “- ISP Myanmar က စီစဉ် ပြုလုပ်နေသော Myanmar Quarterly Symposium ၏ တတိယ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ စကားဝိုင်းကို အောက်ပါ ဗီဒီယိုဖိုင်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းမှန်လျှောက်ဆဲလား၊ လမ်းချော်လွဲပြီလား – ( ပထမပိုင် း)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းမှန်လျှောက်ဆဲလား၊ လမ်းချော်လွဲပြီလား – ( ဒုတိယပိုင်း )
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းမှန်လျှောက်ဆဲလား၊ လမ်းချော်လွဲပြီလား – ( တတိယပိုင်း )
broadcast media room myanmar quarterly symposium
The Institute for Strategy and Policy – Myanmar (ISP – Myanmar) is an independent, non-partisan and non-governmental think tank. Established in 2016, ISP-Myanmar aims to promote democratic leadership and strengthening civic participation in Myanmar through its key strategic programs and initiatives. The institute primarily focuses on research, capacity building, leadership engagement, communication and outreach programs, and desk initiatives on Peace and China issues.
ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ Talk Show (ဒုတိယရာသီအတွက် ဒုတိယစကားဝိုင်း)
ယောမင်းကြီးဇရပ် - Talk Show ၏ (ဒုတိယရာသီအတွက် ဒုတိယစကားဝိုင်း) စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် "ပါတီများပေါင်းစည်းမှု - မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက်မကိုက်သေး" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။